Kachin Duwa: တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာမဟာဗျူဟာ အချိန်အဆအလွဲ
China’s Strategic Misjudgement on Myanmar (By Yun Sun)
စာတမ်း ရေးသားပြုစုသူ ယန်ဆန်းသည် ဘေကျင်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့ပြီး International Crisis Group ၏ တရုတ်အရေး လေ့လာသူ တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Brookings Institution ရှိ အနောက်မြောက် အာရှ မူဝါဒ လေ့လာရေး ဗဟိုဌာန၌ Visiting Fellow အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် အပြီးသတ် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ၏ သုတေသန ကျမ်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ် အုပ်ချုပ်ရေး နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးကို အလေးပေး ပြုစုခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းတွင် တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး အလှည့် အပြောင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းစဉ်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခန့်မှန်းချက် အလွဲများ၊ အနာဂတ် အလားအလာများ အကြောင်း ကို ရေးသား ပြုစုထားသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး အခင်းအကျင်းမှာ များစွာ အပြန့် ကျယ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ နိုင်ငံ့အရေး နှင့် မဟာဗျူဟာ အရွှေ့အပြောင်းများ အကြောင်း ဆင်ခြင် သုံးသပ်နိုင်ရန် ဘာသာပြန်ဆို တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး ဤဆောင်းပါးပါ ဖော်ပြချက်များ အားလုံးသည် မူရင်းပြုစုသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပေသည်။
1. Strategic Changes in 2011
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အတွင်းသို့ ယူနန်နှင့် မြန်မာ ပေါင်းကူးတံတား ထိုးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သော Bridge Campaign ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာလရှည်ကြာ နိုင်ငံရေး ထောက်ခံမှုများ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း အတွက် အတုံ့အလှည့် အားဖြင့် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဖိုရမ်များ၊ အဓိကအားဖြင့် အာဆီယံ အစည်းအဝေး များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်များ၊ တောင်တရုတ် ပင်လယ် အရေးကိစ္စအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထောက်ခံမှုများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် တရုတ် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေသော အမေရိက၏ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှု ကျဆုံးမည်ဟူ၍ သတ်မှတ် ထားပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြီးစီးသွားသည့် အချိန်၌ ဝါရှင်တန် အစိုးရက ယင်းရွေးကောက်ပွဲများ တရားမျှတမှု မရှိသလို လွတ်လပ်မှုလည်း မရှိဟူ၍ ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည့် အခါ အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေး ရပ်တန့် သွားပြီဟု ထင်မြင် ယူဆခဲ့ ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ မဟာဗျူဟာမြောက် အရွှေ့အပြောင်းများနှင့် နမူနာယူ၍ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေ ရန်အတွက် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများနှင့် စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို နှေးကွေးစွာဖြင့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင်ရွက်သွား မည်ဟူ၍လည်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ မူဝါဒ လေ့လာသုံးသပ်သူ အများစုက ထင်မြင် ယူဆခဲ့ကြသည်။ ယုတ်စွအဆုံး ဆိုရလျှင် တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် မူလ ရှိပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံရေးသြဇာနှင့် စီးပွားရေး အရ လွှမ်းမိုးမှုတို့ကို မြှင့်တွက် ခဲ့ကြပြီး မြန်မာပြည်သူများ၏ တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး တွန်းအားကို လျှော့တွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ လျှော့တွက်မှု များကြောင့်ပင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်မူဝါဒ အပေါ် ယုံကြည်မှုများကို ပျက်ပြား သွားစေပြီး ကတိကဝတ်များ ပြိုကွဲ သွားစေသည့် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
2. China’s Basic Interest in Myanmar
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကိုးကန့်အရေး အခင်းသည် တိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စများ၏ ဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ် အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး Peaceful Negotiation ကို အလေးပေး လာစေခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပဋိပက္ခ ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအား နေပြည်တော် အစိုးရမှ လက်နက် စွန့်လွှတ်စေပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များအဖြစ် အတင်းအကျပ် ပြောင်းလဲစေခြင်းများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လာပြီး အကျိုးဆက် အားဖြင့် စစ်ရေး ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန် လာစေခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေရန် အတွက် တရုတ် အစိုးရသည် ယင်း၏ သံတမန်ရေး သြဇာကို အသုံးချခဲ့ပြီး တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အဓိက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော KIA နှင့် UWSA တို့နှင့် နေပြည်တော်အစိုးရ အကြား တိတ်တဆိတ် ကြားဝင် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရအောင်ယူ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု များမြှင့်တင် Persuading for Peace and Promoting Talks မဟာဗျူဟာကို တရုတ် ဗဟိုအစိုးရ နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ များတွင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ တရုတ်ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် များသည်လည်း နယ်စပ်ဒေသ များ၌ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုများ ထိန်းသိမ်းထားရှိရေး အတွက် မြန်မာ ခေါင်းဆောင်များကို လူသိထင်ရှား လက်ချာ ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် လာခဲ့သည် (တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ထုတ်ပြန် ချက်များ၊ ဘီဘီစီ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖော်ပြချက်များ၊ တရုတ် သတင်းဌာန ၏ ၂၀၁၀ ထုတ်ပြန်ချက်များ)။ ယူနန်အရာရှိ များသည်လည်း KIA ခေါင်းဆောင်များ၊ UWSA ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံကြသည့် အခါတိုင်း စစ်မဖြစ်စေရေး နှင့် သည်းခံ ညှိနှိုင်းရေးတို့ကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် ပြောကြားပြီး ဆွယ်တရားဟော Lobby လုပ်ခဲ့ကြသည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း ကူမင်းမှ အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းများ)။
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်သော အာဏာ လွှဲပြောင်းမှုများ တွေ့မြင်ရခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာ လွှဲပြောင်းနိုင် ခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ထားရှိသော တရုတ်အစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်များ အပေါ် သက်ရောက် မှုများ ဖြစ်ပေါ် လာစေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သစ္စာရှိ မိတ်ဆွေရင်း ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းရာတွင် တရုတ် နိုင်ငံ၏ အကူအညီကို လိုလားနေသည် ဟူသော ယူဆချက်များ အရ တရုတ်အစိုးရမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အပေါ် ထားရှိသော ရပ်တည်ချက် မှာလည်း ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းခြင်း မှသည် အမျိုးသားပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး ဆီသို့ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ လာခဲ့သည်။ ဤယူဆချက် အသစ်ကို ဘေကျင်းနှင့် ယူနန်ရှိ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ထိပ်တန်း ပညာရှင် များက ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ (တိုင်းရင်းသား စည်း လုံးညီညွတ်ရေး သည် နေပြည်တော် အစိုးရ၏ အခြေခံ အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ယင်းတို့ လက်ဝယ်ရှိ ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ခွင့်နှင့် လက်နက် ကိုင်ဆောင်ထားမှု တို့ကို ထာဝရ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် မျှော်မှန်းနိုင်မည် မဟုတ်ဟူ၍ ဘေကျင်းနှင့် ကူမင်းရှိ အစိုးရ အရာရှိများက ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းက ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။)
အထက်ပါ အတွေးအမြင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ပိုင်း မှစ၍ KIA နှင့် တပ်မတော် အကြား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ထားရှိသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူဝါဒကို အစဉ်အဆက် လွှမ်းမိုး ထားခဲ့သည်။ အကြီးအကျယ် မလိုလားဟန် ပြသခဲ့ပြီး နယ်စပ် တည်ငြိမ်ရေးကို နေပြည်တော်မှ အလေးထားရန် အပြင်းအထန် တောင်းဆိုခဲ့ သော ကိုးကန့် အရေးကိစ္စနှင့် မတူညီဘဲ တရုတ် အစိုးရသည် ဒုက္ခသည် များ စီးဝင်လာနိုင်သော နယ်ခြား ဒေသများ၌ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကင်းလှည့် ချထားခြင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သည်းခံစိတ်ရှည် ရန်နှင့် စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ)။ သို့သော်လည်း နေပြည်တော် အစိုးရနှင့် စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရာတွင် ကြားမှ ဒိုင်လူကြီး အနေဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့သော KIA ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည် (Dongfangwang 2011)။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များ၏ ပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်များ KIA အဖွဲ့နှင့် ဝေးကွာ ခဲ့ရခြင်းတွင် အကြောင်းရင်းများ များစွာ ရှိနေ သည်။ ပထမဆုံး အချက်မှာ စစ်ဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များမှာ လိုင်ဇာရှိ KIA ဌာနချုပ် အနီးတွင်သာ စုဝေးခိုလှုံလျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်း အရေအတွက် များစွာ စီးဝင်လာခဲ့မှု မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအကျိုး ဆက်ကြောင့် နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု များကို လျော့နည်း သွားစေခဲ့သည်။ (၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း KIA အရာရှိများနှင့် ရွှေလီတွင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်အရ)။
ဒုတိယအချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ရှုမြင်ချက်အရ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော တာပိန်ဆည် စီမံကိန်း ကို ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် တပ်မတော်အား KIA က တိုက်ခိုက်နေခြင်း သည် တရုတ်နိုင်ငံကို ကြားဝင် လာစေရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည် (Dong Fang Zao Bao 2011)။ KIA တပ်ဖွဲ့များက တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များ အပေါ် လေးစား အလေး ထားမှု နည်းပါး နေခြင်းသည် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား ဆန့်ကျင်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ် စေခဲ့သည် (၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ဘေကျင်းနှင့် ကူမင်း တို့တွင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများ အရ)။
Posted by Du Wa at 10:40 AM
Labels: ဗဟုသုတ, သတင်းသုံးသပ်ချက်, သုတေသန